कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम : सरकारको छैन पूर्वतयारी « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७६, १० माघ शुक्रबार ११:२० मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को सुरुवातसँगै नेपाल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा परेको छ। छिमेकी मुलुक चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस पर्यटकमार्फत नेपाल पनि भित्रिन सक्ने उच्च सम्भावना रहेको तर सरकारले रोकथामका लागि पूर्वतयारी नगरेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले चीन र नेपालबीचमा मानिसको आवतजावत बाक्लिँदै गएकाले नेपाल पनि कोराना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको बताए। कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न सरकारले बेलैमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। उक्त भाइरस चीनबाट थाइल्यान्ड, जापान, अमेरिकालगायत मुलुकमा फैलिएको देखिएकाले नेपालमा पनि फैलिने उच्च सम्भावना रहेको पुनले बताए। ‘कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन हामीले नेपाल–चीन सीमानाकामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ’, सरुवा रोग विशेषज्ञ पुनले भने, ‘मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको हेल्थ डेस्क तत्काल खडा गर्न आवश्यक छ।’ उनका अनुसार चीनबाट नेपाल भित्रिने स्थल नाकाभन्दा त्रिभुवन विमानस्थलबाट आउने यात्रीको संख्या बढी हुने भएकाले सरकारले विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क स्थापनालाई प्राथमितामा राख्नुपर्छ। उक्त भाइरस जनावरबाट पनि मानिसमा सर्ने उच्च सम्भावना भएकाले सतर्क रहनुपर्ने उनले बताए।
चीनमा फैलिएको कोराना भाइरस कुनै पनि बेला नेपालमा भित्रिन सक्ने चेतावनी विज्ञले दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै पूर्वतयारी गरेको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थापना गरिएको हेल्प डेस्कसमेत एचएको भरमा चलिरहेको छ। हेल्प डेक्स हेर्नेगरी एचएको नेतृत्वमा खटिएका कर्मचारीसमेत नियमित बस्दैनन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालकै अर्का विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोलाले कोरोनाको सम्भावित जोखिन रोक्न इबोला भाइरस फैलिएका बेला जस्तै हेल्थ डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने बताए। सरकारले कोरोना भाइरसबाट जोगिन अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ।